*** အွန်လိုင်း ပေါ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ချို့ဆင်ခြင်ဖို့ *** | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » *** အွန်လိုင်း ပေါ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ချို့ဆင်ခြင်ဖို့ ***
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Dec 15, 2011 in Buddhism | 32 comments
ချမ်းချမ်း အင်တာနက် သုံးတာ နှစ်နှစ်နီးပါး ကာလအတွင်းမှာ ဖတ်ခဲ့သမျှ Post တွေ Comment တွေ နဲ့ ပက်သက်ပြီး ရင်ထဲ၇ှိတာ ဝေဖန်ဆွေးနွေးချင်တဲ့အကြောင်းလေးပါ။
လူတစ်ကိုယ် စိတ်တစ်မျိုးမို့ ခံယူချက်တွေ၊ ထင်မြင်ချက်တွေ ခံစားချက်တွေ တူချင်မှလည်း တူလိမ့်မယ်။ အခုရေးတဲ့ပိုစ့်ဟာ
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ ခဲ့ရတဲ့ အဆဲသန်တဲ့ တစ်ချို့ သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူငယ်ချင်း တွေကို ချမ်းချမ်းသိထားတာတွေကို ပြန်လည်မျှဝေတဲ့သဘောပါ။
အမှားပါရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ကြိုတောင်းပန်ပါတယ်။
စာပေလောကမှာ ပုံနှိပ်တိုက် ထောင်ပြီး အကျိုးအမြတ်အတွက် စာအုပ်တွေထုတ်ဝေနေတဲ့စီးပွါးရေးသမားတွေ၊ အချစ်ဝတ္ထုတွေ၊ရေးရင်းနာမည်ကြီးပြီးချမ်းသာ
သွားကြတဲ့ စာရေးဆရာမတွေ ရဲ့ ဘ၀ နဲ့ စာရင် ချမ်းချမ်းတော့ အင်တာနက်ပေါ်က Site ပိုင်၇ှင်များနဲ့ စေတနာရှင် စာရေးတဲ့သံဃာတော်များ
၊ဘလောဒ့်ဂါများနဲ့ ပိုစ့်ရေးကြတဲ့သူများအားလုံးကို အရမ်းလေးစားအားကျမိတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ်ခဲ့ရတဲ့ စာတွေအားလုံးဟာ
စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဇာတ်လမ်း.တွေမဟုတ်ပဲ ဘ၀အမြင်၊လောကအမြင်နဲ့ ကိုယ်သိသမှ ခံစားမိသမျှ ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ ရသစာတွေ ဖတ်ရလို့ ပါပဲ။
အင်တာနက်ပေါ်က ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်တွေဟာပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး Site တွေ BlogSpot ၀ယ် ပြီးကိုယ်ကျိုးစီးပွါးအတွက် မဟုတ်ပဲ စေတနာသက်သက်နဲ့ 
စီးပွါးရေး၊လူမှုရေး၊ဘာသာရေး၊ဘ၀အမြင်တွေ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်ဗဟုသုတစာပေ တော်တော်များများ ကို မျှဝေပေးနေသလို Blogger များနဲ့Site တွေမှာ Post တင်တဲ့
သူတော်တော် များများဟာ လူငယ်တွေ အသိအလိမ်မာရှိဖို့ ၊အတွေးအခေါ်တွေရင့်ကျက်ဖို့ ၊ငွေရဖို့ အတွက်မဟုတ်ပဲ အချိန်အကုန်ခံပြီး ၀ါသနာအရ စာပေတွေမျှဝေပေးတာဟာ
ပညာဒါန ပြုနေကြတာပါ။ ၃၈ ဖြာမင်္ဂလာတရားထဲမှာ အသိပညာ ဗဟုသုတ နဲ့ ပြည့်စုံတာလည်းမင်္ဂလာတစ်ပါး လို ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်။
အပြင်က ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နဲ့အင်တာနက်ပေါ်က ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
စာဖတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ အပြင်က ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို မနှစ်သက်ဘူး ဆိုရင် မူရင်းရေးတဲ့သူ
ကိုတိုက်ရိုက်ဝေဖန်စာရေးလို့ မရဘူး။ အဲ့ဒီစာရေးဆရာကိုမကျေနပ်ရင်လဲ တိုက်ရိုက် ဆဲလို့ မ၇ဘူး။ ကိုယ့်အတွေးကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ မကိုက်လို့ ပြိုင်ပြီးငြင်းလို့ လဲမရဘူး။
ဒါ့ကြောင့် အပြင်က စာရေးတဲ့သူတွေဟာ စာတစ်ပုဒ်ရေးတိုင်းသူတို့ အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ 
ပိုက်ဆံကရပြီးသားပဲ၊ မကြိုက်တဲ့သူမဖတ်နဲ့ ကြိုက်တဲ့သူဖတ်။ တိုက်ရိုက်ဝေဖန်ဆဲဆိုတာမခံရတော့ နားပူသက်သာတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က ပိုစ့်ရေးကြတဲ့ သူတော်တော်များများကတော့
ပိုက်ဆံရဖို့ ပိုစ့်ရေးနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ပိုစ့်ဟာ ဖတ်တဲ့သူရဲ့ စိတ်နဲ့ မကိုက်ရင်လဲ အပြစ်တင်ခံရတယ်။
Post တိုင်းမှာ ဖတ်တဲ့သူအတွက် Comment ရေးဖို့ အခွင့်အရေး၇ှိပါတယ်။Comment ဆိုတာကလည်း စာရေးတဲ့သူနဲ့ စာဖတ်တဲ့သူ ကြားက အတွေးအမြင်
တွေဖလှယ်တဲ့သဘော။အားပေးတဲ့သဘော ဝေဖန်ဆွေးနွေးတဲ့ သဘောလောက်ပဲ ရှိသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ထင်မြင်ရာ တစ်ဖက်သတ် ရမ်းပြီး
လူမျိုးခြား နဲ့ တစ်ခြားသောဘာသာဝင်တွေကိုရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆဲဖို့ တော့ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေး ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ Comment ပြဿနာတွေ မန်ဘာအချင်းချင်းအဆင်မပြေတာတွေ
တော်တော်များများ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ နေရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ လကျော်လောက်တုန်းက
facebook မှာ အမေစုနာမည်နဲ့ အကောင့်ဖွင့်ပြီး အမေ နဲ့ စုNLD အဖွဲ့ ဝင်တွေကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲထားတဲ့ သူတစ်ယောက် တွေ့ လိုက်ရတယ်။
အမေစုကိုလည်း မိန်းမပျက်တစ်ယောက်လို သတ်မှတ်ပြီး ဆဲနည်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆဲထားလိုက်တာ တော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတယ်။
ချမ်းချမ်းဘ၀ မှာ အဲဒီလောက် အောက်တန်းကျတဲ့သူ တစ်ခါမှမတွေ့ ဖူးဘူး၊ရိုင်းစိုင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ငါးစိမ်းသည်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ယုတ်ညံ့တဲ့ စကားလုံတွေနဲ့ ဆဲထားတာလည်း
မိုးမွှန်နေတာပဲ။အဲ့ဒီဆဲတဲ့ သူဟာ လူ လာဖြစ်ပေမယ့် လူတစ်ယောက်လို စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသိညဏ် ရှိမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး။
အမေကိုစု ဆဲလိုက်လို့ အမေဆုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျမသွားဘူး၊ အမေစုငရဲမကျသွားဘူး၊ အမေဆုဘာမှဖြစ်မသွားဘူး၊ကိုယ်တိုင်ပဲ အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်၊ကိုယ်တိုင်ပဲငရဲကျတယ်။
ပြီးတော့ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ တခြားသူလဲ စိတ်ရှုပ်ရ၊ဒေါသထွက်ရတယ်။
မေတ္တာ၇ှင် (ရွှေပြည်သာ) အ၇ှင်ဇ၀န ရဲ့ **ဘ၀နဲ့ ရင်းရသော အတွေးအမြင်များ**စာအုပ်ထဲမှာ
(၁) ပရာနုဝါဒဘေး….ဆိုတာ သူတစ်ပါးက ကဲ့ရဲ့ အပုတ်ချ စွပ်စွဲခံရတဲ့ဘေးပါ။အဲ့ဒီဘေးကို လူတိုင်းကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဘုရား၊ရဟန္တာ တွေတောင်မှ မလွတ်ပါဘူး၊
အဲ့ဒီဘေးမှာ ကိုယ်က အမှန်တစ်ကယ်အပြစ်ကင်းနေရင် သီလ လုံခြုံနေရင် ကိုယ့်ကို ငရဲကျအောင် မပို့ ပေးနိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ် ဆဲတဲ့သူပဲ ငရဲကျပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ အဆဲခံလိုက်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သီလ လုံခြုံနေရင် တစ်ကယ် သူတော်ကောင်းဖြစ်နေရင် ဆဲလိုက်တဲ့သူဟာ ဘ၀မကူးပါဘူး၊ဒီဘ၀မှာပဲ ဘေးဆိုးကြုံရပါတယ်။
အသေဆိုးနဲ့ သေရပါတယ်။ ဘုရားကိုစွပ်စွဲပုတ်ခတ်စော်ကားခဲ့တဲ့ စိဉ္စမာန မိန်းမဟာ ချက်ချင်းမြေမြိုခံရသလို သုန္ဒရီ ဟာလည်းအသေဆိုးနဲ့ သေခဲ့ရပါတယ်။
(၂) အတ္တာနုဝါဒဘေး…ဆိုတာက ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ပြန်လည်အပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ တဲ့ ဘေးပါ။ အဲ့ဒီဘေးကတော့ သူတစ်ပါးမစွပ်စွဲပေမယ့် ကိုယ့်လုပ်
ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကို သူများမသိပေမယ့် ကိုယ်ပဲသိလို့ကိုယ်တိုင်ငရဲကျနိုင်တဲ့ဘေးပါ။ အပြင်ပန်းသူတစ်ပါးအထင်ကြီးအောင် ချီးမွမ်းအောင် နေပြီး
ကိုယ်တိုင်က လူမသိ သူမသိ မဟုတ်တာတွေ အကုသိုလ်တွေလုပ်နေရင်တော့ အဲ့ဒီဘေးဟာ ငရဲကလည်းမလွတ်နိုင်ပါဘူး။
အခု..အမေဆုကို ပုတ်ခတ်စော်ကားတဲ့သူဟာ အမေဆုသာ တစ်ကယ် သီလနဲ့ ပြည့်စုံနေရင် တစ်ကယ် ပြည်သူအတွက် အနစ်နာခံ တယ်ဆိုရင် ဆဲတဲ့သူပဲ
အပြစ်ပိုကြီးပါတယ်။ အမေဆုရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ စိတ်ဓါတ်တွေ အောက်တန်းကျမသွားဘူး။
မြတ်စွာဘုရား ၇ှင်ကိုယ်တိုင် တရားနာပရိတ်တွေေ၇ှ့ မှာပုတ်ခတ်ဆဲဆိုတာ ခံရဖူးပါတယ်။အဲ့ဒီအခါ ဘုရားရှင်က ဆဲတဲ့သူကို လက်ဆောင်တစ်ခုနဲ့ ဥပမာပေးပါတယ်။
.**၀စီဗေဒ ထိထိုင်းရှ*** ဆိုပြီး မြန်မာစကားပုံလဲ ၇ှိတယ်လေ။ဒါ့ကြောင့် အရေမရ အဖတ်မရ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆဲတာ ရှောင်ကြပါ။
တစ်ခါတစ်လေ တစ်ချို့ ပိုစ့်တွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာတွေက ဘာသာခြားလူမျိုးခြားတွေကို ”အမျိုးယုတ်တွေ ကိုမုန်းတယ် အဲ့ဒီကုလားမျိုးတွေ ကမ္ဘာမြေပေါ်က နေပျောက်သွားပါစေ”
.“ ကုလားတွေဆို ရွံတယ် တဲ့” အဲ့ဒီလို Comment မျိုးတွေ တစ်ချို့ ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ ခဏခဏ တွေ့ ဘူးတယ်။
အဲ့ဒီComment တွေမြင်ရတိုင်း ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ဆိုဒ်တိုင်းမှာ ဖောင်ဒါတွေနဲ့ အက်ဒ်မင်တွေကိုယ်တိုင် နိုင်ငံရေး၊ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲဆိုတာ တားမြစ်ထားပါတယ်။
တစ်ချို့ က ငါ့ပါးစပ်နဲ့ ငါဆဲတာ ငါ့အကုသိုလ် ငါ၇ှာတာ သူများကို ငရဲပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆင်ခြေပေးချင်တဲ့သူတွေ ၇ှိပါလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ ဆိုတော့ ကိုယ်စိတ်ထင်ရာ လုပ်လို့ သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်ဘူး ထင်ပါလိမ့်မယ်။
သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အမျိုး ၊ဘာသာ ၊သာသနာကို ထိခိုက်နေတာ သတိပြုမိကြဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်မှတ်သားစရာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
သားတော် ရာဟုလာ သာသနာ့ဘောင်ထဲစ၀င်တော့ အသက်က ၇ နှစ်သားလောက်ပဲ ၇ှိတာမို့ တခြား သောရဟန်းတွေလို ၀ိနည်းတွေ သိက္ခာပုဒ်တွေ ထိန်းရအောင်
အသိညဏ်က ကလေးသာသာ ရှိသေးလို့မရင့်ကျက်သေးတော့ ဘုရား၇ှင်က စကားသုံးခွန်း နဲ့ ပထမဦးဆုံး လိုက်နာဆင်ခြင်ဖို့ ဆုံးမပါတယ်။
***ချစ်သား ရာဟုလာ ကာယကံ(ကိုယ်အမူအရာ) နဲ့ ပြုလုပ်မယ့် အလုပ်တစ်ခု လုပ်မယ်ဆိုရင် မလုပ်ခင် အရင်စဉ်းစားပါ။ဆိုလိုတာက (အရင်ဆုံးသတိထားပါ)။ ငါ့အတွက် ဒါမှမဟုတ်
အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ ။တစ်ကယ်လို့ အရင်မစဉ်းစားမိဘဲနဲ့ လုပ်မိသွားတယ်ဆိုရင်တောင် လုပ်နေတုန်းမှာ စဉ်းစားပါ။(သတိထားပါ၊)
ငါသူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာ နိုင်မယ် ဆိုရင် ဆက်မလုပ်ပါနဲ့ ချက်ချင်းရပ်ပစ်ပါ။ တစ်ကယ်လို့ လုပ်နေတုန်းမှာ သတိမထားမိလို့ လုပ်ပြီးသွားခဲ့ရင်တောင် ငါလုပ်ခဲ့တာဟာ ငါ့အတွက်
ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးအတွက် ထိခိုက်နစ်နာသွားသလားဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားပါ။တစ်ကယ်လို့ ငါ့ အတွက် သူတစ်ပါး အတွက် ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင် နောက် ဘယ်တော့မှ
၀စီကံ (နှုတ်အမူအရာ) နဲ့ ပြောဆိုမယ့်စကားတစ်ခွန်းကိုလည်း မပြောခင်မှာ အရင်စဉ်းစားပါ။ငါ့ အတွက် သူတစ်ပါး အတွက်ထိခိုက်နစ်နာ နိုင်မယ်ဆိုရင် မပြောမိပါစေနဲ့ ။
မစဉ်းစားမိဘဲပြောမိသွားခဲ့ရင်တောင် ပြောနေတုန်းမှာ သတိထားပါ။ငါ့အတွက် သူတစ်ပါး အတွက် ထိခိုက်နိုင်မယ် ဆိုရင် ဆက်မပြောပါနဲ့ ချက်ချင်းရပ်လိုက်ပါ။
တစ်ကယ်လို့ သတိမထားမိဘဲ ပြောပြီးသွားခဲ့ရင်တောင် ပြန်စဉ်းစားပါ။ငါ့ အတွက် သူတစ်ပါးအတွက် ထိခိုက်နစ်နာသွားတယ်ဆိုရင် နောက်အဲ့ဒီစကားကိုဘယ်တော့မှ
မနောကံ( စိတ်အမူအရာ )နဲ့စဉ်းစားကြံစည်မယ့်အရာကိုလည်း မစဉ်းစားခင် မကြံစည်ခင် သတိထားပါ။ငါ့အတွက် သူတစ်ပါးအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမယ့် အတွေးမျိုး
မကြံမိအောင် အရင်စဉ်းစားပါ။တစ်ကယ်လို့တွေးမိသွားတယ်ဆိုရင်တောင် သတိထားပါ၊ ငါ့အတွက် သူတစ်ပါးအတွက် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်တယ်ဆိုရင်
တစ်ကယ်လို့ တွေး မိပြီးသွားပြီဆိုရင်တောင် ပြန်စဉ်းစားပါ။ငါ့အတွက် သူတစ်ပါးအတွက် ထိခိုက်နစ်နာသွားတယ်ဆိုရင် နောက်ဘယ်တော့မှ အဲ့ဒီအတွေးကိုထပ်မတွေးမိပါစေနဲ့ ***
ဒါက ၇ နှစ်သားအရွယ် ကလေးလေးတစ်ယောက် လိုက်နာကျင့်ကြံရမယ့် ဘုရားကပေးတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့အဆုံးအမနည်းလေးပါ။ အခု တစ်ချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင်
တခြားသော လူမျိုးခြား၊ဘာသာခြားတွေကို ဆဲဆိုလိုက်တာဟာ ၀စီကံ နဲ့ မနောကံ ပြစ်မှုကိုကျုးလွန်တာပဲ။
လူကိုယ်တိုင်ဆဲမရလို့ စာနဲ့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းသုံးနှုန်းပြီးရေးထားတာလဲ ၀စီကံ နဲ့ မနောကံထိုက်တာပါပဲ။
မဆဲခင်မှာ ငါဆဲလိုက်ရင် ငါ့အတွက် ငါ့ဘာသာအတွက် အကျိုး၇ှိလား၊မရှိဘူးလားဆိုတာ သေချာပြန်တွေးပါ။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ အဆဲသန်တဲ့ ကလေးတွေကို လူတွေက မိမဆုံးမ၊ဖမဆုံးမ မို့ လို့ ဒီလောက်ရိုင်းနေတာလို့ပြောကြတာ ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်စိတ်ထားက ညံ့လို့ဘာသာခြား၊လူမျိုးခြား တွေကိုရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆဲဆိုတာဟာ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာက မဆုံးမရာ ရောက်လို့ကိုယ့်ဘာသာကို
ပြီးတော့ ကိုယ်ယုံကြည်နေတဲ့ ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘုရား နဲ့ ကိုယ် ကိုးကွယ်တဲ့သာသနာရဲ့ ဂုဏ်ကို ညှိုးနွမ်းအောင်လုပ်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
***သူ့ ဂုဏ် နှိမ့် ရင် ကိုယ့်ဂုဏ် နိမ့်တယ်***လို့ဆရာတော်တစ်ပါးက ဆုံးမခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ဘာသာခြား ၊လူမျိုးခြားတွေကို ဆဲဆိုဖို့မုန်းတီးဖို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်း သင်ခဲ့ဖူးပါသလား။
သာသနာပြုနေကြတဲ့ ဆရာတော်များ ကိုယ်တိုင် ဘာသာခြား လူမျိုးခြားတွေကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆဲပြီးမှ သာသနာပြုခဲ့ပါသလား။
သင်သာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ် ဖြစ်ပြီး ဘုရားကို ရိုသေရင်တယ်ဆိုရင် သေချာပြန်စဉ်းစားသင့်ပါ။
ဝေဖန်တာ နဲ့ ဆဲဆိုတာကို နားလည်သလို ပြောရရင် လူမျိုးတစ်စု၊ဘာသာတရားတစ်ခုကို လူသားတိုင်း ဝေဖန်ဆန်းစစ်လေ့လာခွင့် ၇ှိပါတယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာ(ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတရား)
သစ္စာလေးပါတရားကို မှန် မမှန် ယုတ္တိ၇ှိမ၇ှိ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခွင့်ရှိသလို ။ခရစ်ယာန်သာသနာ ၊အစ္စလာမ် သာသနာ တို့ 
ရဲ့ ဟောပြောချက် ဆုံးမချက် ကိုလည်း ဘာသာဝင်အားလုံးက
ဝေဖန်ဆန်းစစ်လေ့လာခွင့် ၇ှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာနဲ့ ပက်သက်လာရင်ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲဆိုဖို့ တော့ လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ဘာသာခြား၊လူမျိုးခြားကို မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်က ဆဲဆိုဖို့ မသင့်သလို၊ဘာသာခြား လူမျိုးခြားကလည်း မြန်မာလူမျိုး၊ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆဲဆိုဖို့ မသင့်ပါဘူး။
ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူသားတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ လူ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပါပဲ။
တစ်ချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲက လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေကို အလိုလိုနေရင်းမုန်းတယ်၊ရွံတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ ကို တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့မုန်းရတာလဲ။ရွံတယ် ဆိုရင်ရော ဘာကြောင့်ရွံရတာလဲ ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာပြန်မေးကြည့်ပါဦး။
သူတစ်ပါးကို အမျိုးယုတ်တွေလို့ ဆဲလိုက်တိုင်း ကိုယ့်အမျိုးအားလုံးကို ကိုယ်ပြန်စစ်ကြည့်ပါ ။ကိုယ့်အမျိုးအားလုံး
တစ်ကယ် မြတ်ပါသလားလို့ ။ သူတစ်ပါးကို ရွံစရာလို့ သတ်မှတ်လိုက်တိုင်း ကိုယ့် စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါ။တစ်ကယ်သန့် ပါသလားလို့ ။
လူမျိုးခြား၊ဘာသာခြားမို့ လို့ သူတို့ ရဲ့ အယူအဆတွေ ကိုယ်က လက်မခံနိုင်လို့ 
အလိုလိုနေရင်းနဲ့ မုန်းနေတာဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ နှလုံးသားမှာ လူလူချင်းအပေါ်ထားရှိတဲ့ အမုန်းတရားတွေ ဟာ ဘယ်လိုမှ မ၇ှိသင့်တဲ့အရာပါ။
တစ်ချို့ က…ဘာသာခြားတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတွေကို ရာထူးတွေငွေတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ပြီး သူတို့ ဘာသာထဲ အတင်းသိမ်းသွင်း လို့ သူတို့ လူမျိုး ကို မုန်းတယ်လို့ 
ဒါကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ မြင့်မိုရ်တောင်လောက်အပြစ်ကို မမြင်ပဲ သူတစ်ပါးရဲ့ ဇီးစေ့လောက်အပြစ်ကို မြင်ပြီးပုံကြီးချဲ့ တာနဲ့ တူပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင် ဘာသာတန်ဖိုး၊ဘ၀တန်ဖိုး မသိရင် ငွေအတွက် ရာထူးအတွက် စည်းစိမ်အတွက်နဲ့ 
ခြွင်းချက်အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေ၊အမျိုးသားတွေ ဘာသာခြားကို တစ်ကယ်ချစ်မိလို့ ဘာသာခြားကိုယူလိုက်တဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ သူဟာ ရတနာသုံးပါးရဲ့ ကျေးဇူး၊နဲ့ ကံ ကံရဲ့ အကျိုး ကိုမယုံတဲ့သူဆိုရင် ဘာသာခြားကို ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့
ဘာသာရေး အဆုံးအမ နဲ့ ဘာသာတန်ဖိုးမသိလို့ ပဲ။ တစ်ချို့ ကျတော့ ဘာသာခြားကို ချစ်လို့ ယူလိုက်တယ် ဘာသာခြားကိုလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူး၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး
နားလည်မှုတွေ မထားနိုင်ကြဘူးဆိုရင် ပြဒါးတစ်လမ်း သံတစ်လမ်းနဲ့ အသွင်မတူတော့ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေကြပြန်ဘူး။
သူရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း ဆွေမျိုးမောင်နှမ ဘာသာဝင်အနေနဲ့ ကြည့်ရင် ကိုယ်ဟာ ရုပ်တုတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ အယူမှားတဲ့သူတွေ၊
ကိုယ့်ဘက်က အသိုင်းအ၀ိုင်း ကလည်း သူတို့ ဘာသာကို မမြင်ဘူးတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင် ကယ်တင်ရှင် တွေ ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ အယူမှားတဲ့ သူတွေ
လို့ မြင်ကြပြန်ရော။ အချစ်နဲ့ ဘ၀ ထပ်တူမကျ ခဲ့ရင် အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဘ၀တစ်ခုတည်ထောင်လို့ မရဘူး။အချစ်ဆိုတာ ရင်ထဲက ခံစားချက်တစ်ခု.ဘ၀ဆိုတာ လက်တွေ့ 
ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ခရီးလမ်းတစ်ခု။ဘာသာတရားဆိုတာက သံသရာခရီးအတွက် ပန်းတိုင် တစ်ခု။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ဘ၀ ကို ဘယ်လိုခရီးလမ်းမျိုးလျှောက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုပန်းတိုင်မျိုးရောက်ချင်လဲ ဆိုတာ သေချာ လေ့လာဆန်းစစ်ပြီးမှ ရွေးချယ်ပြီးလျှောက်လှမ်းသင့်ပါတယ်။
အဓိက အရေးကြီးဆုံးက ဘယ်အရာကိုမဆို တန်ဖိုးသိအောင်သေချာလေ့လာဆန်းစစ်ပါ။ ***တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုး၇ှိမယ် တန်ဖိုး၇ှိမှ တန်ဖိုးထားကြမှာပါပဲ***
ဘာသာခြားတွေကိုယ်တိုင် သူတို့ ဘာသာကို လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြတာဟာ ဘာသာတန်ဖိုးကို သိ ပြီး ဘာသာရေးအဆုံးအမအတိုင်းနေကြလို့ ပါပဲ။
ကိုယ့်ဘက်က ဘာသာရေး အဆုံးအမတွေ အသိညဏ်တွေအားနည်းနေတာကို အရင်မြင်ပါ။သူတစ်ပါး ရဲ့ အပြစ်ကို အရင်မမြင်ပါနဲ့ ။
ကိုယ်တိုင်က ဘာသာတန်ဖိုး သိအောင် ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတွေ ကိုကိုယ်ပိုင်ညဏ်နဲ့ သေချာ ဆန်းစစ်လေ့လာပါ။
ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ အားနည်းချက်ကို အရင်မြင်အောင်ကြည့်ပြီး ပြုပြင်ပါ။
ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် လူကောင်း လူဆိုး အမျိုး ဘာသာ အဆင့်အတန်းမရွေး ပဲ တစ်ပြေးထဲမေတ္တာ ထားပါတယ်။ အောင်ခြင်း၇ှစ်ပါး ကို လည်း မေတ္တာဓါတ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့နေ့ စဉ် ဘုရား၇ှိခိုး ကန်တော့ တိုင်း ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ ပြီး အမျှဝေ တဲ့အခါ လူ၊နတ်၊ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအားလုံး ပါပါတယ်။
မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ မေတ္တာပို့ နည်းလေးထဲမှာ
***ကမ္ဘာပေါ်ရှိ များဘိသူတွေ ရောဂါကင်းလျှက်အသက်တာ၇ှည်
ချမ်းသာကိုယ်စိတ်ယိုဖိတ်လျှံဝေ ဘေးခပ်သိမ်း အေးငြိမ်းကြပါစေ***
***သုံဆယ့်တစ်ဘုံ နေကုန်သူတွေ ရောဂါကင်းလျှက် အသက်တာရှည်
ချမ်းသာကိုယ်စိတ် ယိုဖိတ်လျှံဝေ ဘေးခပ်သိမ်း အေးငြိမ်းကြပါစေ ***
လို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ လူသားအားလုံး သတ္တ၀ါအားလုံး ကို မေတ္တာထားဖို့ ပါပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန့် ပွားအောင် သာသနာပြုခဲ့ကြတဲ့ ရဟန္တာများ နဲ့ သံဃာတော်များအားလုံးဟာ ခန္တီဆိုတဲ့သည်းခံခြင်း ၊ စေတနာ၊ဂရုဏာ၊မေတ္တာဓါတ်၊အပြည့်နဲ့ 
သာသနာတော်ကို စောင့်ေ၇ှာက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သာသနာအတွက် အတွက် မတရား ညှင်းဆဲ သတ်ဖြတ် ပြီးတော့လည်း မသိမ်းသွင်းခဲ့ပါဘူး။ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့သူတွေကိုလည်း
အပြစ်မပေးခဲ့ဖူးပါဘူး။ဗုဒ္ဓပေးတဲ့အဆုံးအမလေးတစ်ခုက***ချစ်သား ချစ်သမီးတို့တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက သင်တို့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို တစ်စစီ
ဖြတ်တောက်ပြီး ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်နေစေဦး အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ် ဒေါသအမျက်မထွက်ပဲ နဲ့ မေတ္တာဘာဝနာကိုသာအထပ်ထပ်ပွားပါ။အကယ်၍ ဒေါသအမျက်ထွက်ခဲ့ရင်
် ငါဘုရားရဲ့ အဆုံးအမကို ဆန့် ကျင်တဲ့သူပဲ။သင်တို့ ကိုယ်တိုင် ဒေါသစိတ် နဲ့ သေခဲ့ရင် င၇ဲကျလိမ့်မယ်။မေတ္တာ ပွားပြီးမေတ္တာဈာန်နဲ့ သေရင်တော့ ဗြဟ္မာ
တောင်ဖြစ်ပါတယ်*** လို့ ဆုံးမထားပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရား ၇ှင်နဲ့ ဆရာတော်ကြီးများကိုယ်တိုင် မေတ္တာ ဂရုဏာထားဖို့ ဆိုဆုံးမခဲ့တာမို့ကိုယ်တိုင်က လူလူချင်း မုန်းတဲ့စိတ် နဲ့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲဆို ဖို့ မသင့်ပါဘူး။
အခုဆိုရင် ဆရာတော်သံဃာတော်များက ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ကို ကမ္ဘာအနှံ့ သာသနာပြုနေကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သိပ္ပံပညာ နဲ့ အပြိုင် အစမ်းသပ်ခံပြီး ဟောပြနေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ညံ့ဖျင်းအောက်ကျနေရင် ကိုယ့်ဘာသာကို သူတို့ တွေက ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တောင် အထင်ကြီးလေးစားမှုသိပ်မ၇ှိပါဘူး။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ *** ငါတို့ ကိုသာ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင် ၀ိပဿနာကမဋ္ဌာန်းတရားတွေဟောနေတာ သူတို့ ဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင်က
စိတ်ဓါတ်ရေးရာနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား အောက်တန်းကျနေတာပဲ*** လို့ ပြောကြမှာတေ့သေချာပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်သာသနာကို ကိုယ်တိုင်ရိုသေမှ သူများက ရိုသေမှာပေါ့။
ကိုယ်တိုင်က ဘာသာခြား လူမျိုးခြားကို ဆဲနေ၊မုန်းနေလို့ဘာသာခြား လူမျိုးခြားက ပျောက်မသွားဘူး၊ကုန်မသွားဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်သာသနာ ကိုယ့်လူမျိုးပဲ ဂုဏ်ညှိုးပါတယ်။
ကိုယ်ပဲ ၀စီကံ မနောကံ အကုသိုလ်ထိုက်ပါတယ်။ဒီအချက်လေးကိုတော့ အလေးအနက်ထားကြပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်က ဒီဘ၀မှာတောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမယ့် စိတ်ဆိုး စိတ်ညံ့တွေနဲ့ ဒေါသတရားတွေနဲ့ ရိုင်းရိုင်းဆဲဆိုနေရင် ။ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်ကယ်ကြည်ညိုတာ
မြတ်စွာဘုရားက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းကို ဆဲလို့ အကုသိုလ်ဖြစ်တယ် ဘာသာခြား သာသနာခြားကို ဆဲရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့ မျက်နှာလိုက်ပြီး မဟောခဲ့ဘူးနော်။
သတ္တ၀ါ အားလုံးအပေါ်မေတ္တာထားဖို့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားဖို့ ပဲဟောခဲ့ပါတယ်။သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ မှာ လူ့ ဘုံက အမြတ်ဆုံးလို့ ဟောထားတယ်။
ရခဲခြင်း ၅ မျိုးထဲမှာ လူ့ ဘ၀ ကိုရခဲတယ်လို့ ဟောထားတာပါတယ်။ေ၇ှးဘ၀က ကုသိုလ်ကံ ၇ှိမှ ဒီဘ၀ လူလာဖြစ်ရတာနော်။
ဒါ့ကြောင့် ဘာသာခြား၊လူမျိုးခြား လည်း ဘုန်းကံ၇ှိတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ပါဘဲ။ ကံအကျိုးပေးကြောင့်သာ လူမျိုးခြား၊ဘာသာခြား ဖြစ်နေရတာပါ။ သူတို့ ဘာသာသူတို့ 
လူမျိုးကို မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ထားလိုက်ပါ။ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းတော့ မဆဲကြပါနဲ့ ။ ကြားရတာ ဖတ်၇တာနဲ့ တင် ရှက်စရာကောင်းလွန်းလို့ ပါ။
ပြီးတော့ ရတနာသုံးပါးရဲ့ ဂုဏ်လည်းညှိုးပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ အဆုံးအမကို မလေးစားရာလည်း ရောက်ပါတယ်။
ကိုယ်ဟာ ဒီဘ၀မှာ ဒီလူမျိုး၊ဒီဘာသာကို မုန်းတယ် ၊ရွံတယ် ဆိုပါစို့ .တစ်ကယ်လို့ နောက်ဘ၀မှာ ကိုယ်မုန်းတဲ့ လူမျိုး ကိုယ်မုန်းတဲ့ ဘာသာရဲ့ မိခင်ဝမ်းထဲဝင်စားရင်တော့ သေချာတယ်
အဲ့ဒီလူမျိုး၊အဲ့ဒီဘာသာ ကို ကိုယ်လဲ လိုက်ပြီးကိုးကွယ်ရမှာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ…လက်၇ှိဒီဘ၀မှာ သရဏဂုံ တည်ပေမယ့် ရတနာသုံးပါး ဘယ်လောက်ပဲ ရိုသေနေပေမယ့်
၀ိပဿနာညဏ်၊သောတပတ္တိ မဂ်ညဏ် ဖိုလ်ညဏ်ရအောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဘ၀မှာ ကံဆိုးရင် ဘာသာခြားဘ၀တောင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဘ၀မှာတည်ထားတဲ့
ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ သရဏဂုံဟာဒီဘ၀မှာပဲတည်ပါတယ်။နောက်ဘ၀ ပါမသွားပါဘူး။ နောက်ဘ၀ပါသွားတာက ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ကုသိုလ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်
ချမ်းချမ်းတို့ လို ပုထုဇဉ်တစ်ယောက် သေသွားခဲ့ရင် ကုသိုလ်အကုသိုလ်အတိုင်း ခံစားစံစားရမှာမို့ ရောက်ချင်တဲ့
ဘ၀ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်မ၇ှိဘူး၊ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကံက ပို့ ပေးမှာ။ဒါ့ ကြောင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ဘယ်လောက်ပဲ ၇ှိရှိ ဘာသာခြားရဲ့ ဝမ်းထဲလဲရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဘ၀မှာ ဒါနပြုထားလို့နောက်ဘ၀ ဘာသာခြားမိခင်ဝမ်းထဲ ၀င်စားရင်တော့
ချမ်းသာတဲ့ဘာသာခြား ၀မ်းထဲဝင်စား၇မှာပါပဲ၊သီလစောင့်တည်ထားလို့ ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ ဘာသာခြားဖြစ်မှာပါပဲ၊ဒါပေမယ့် ကိုးကွယ်ရမှာကတော့ သရဏဂုံမဟုတ်တော့ဘူး။
ကိုယ့်မိဘတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို လိုက်ပြီး ကိုးကွယ်ရတော့မှာနော်..
ဒါဟာ မမြင်နိုင်တဲ့ ကံတရားရဲ့ ဖန်တီးမှုပါပဲ။မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို သက်သေတစ်ခုပြပါ့မယ်။
ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် သဗ္ဗင်ညုတ ညဏ်တော်ရဖို့လေးသင်္ချေ နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းမှာ ဘ၀မေ၇ွး၊ဘာသာမရွေး၊ ကာလမေ၇ွး
ကျချင်ရာဘုံဘ၀ကျပြီး ပါရမီအကျဉ်းဆယ်ပါး အကျယ်သုံးဆယ်ဖြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဖြစ်စဉ်တော် တစ်ခုအကြောင်းပြောပြပါ့မယ်။
ကဿပ မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထပ်မှာ ဘုရားအလောင်းတော်ဟာ ဘာသာခြားတစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့ တော့ တောထဲမှာ ဘုရားဖြစ်ဖို့ ဒုက္ခရစရိယ
ကျင့်နေတဲ့ ကဿပ ဘု၇ားအလောင်းတော်ကိုမြင်တဲ့အခါ ဘေးကအဖော်ပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့****ဒီကိုယ်တော် ဘုရားဖြစ်ဖို့၆ ရက်ကျင့်တာနည်းတာပေါ့
ငါ့အလှည့်ကျ ၆ နှစ်ကျင့်ပြမယ်*** လို့ အထင်သေးပြီး နှုတ်နဲ့ ပြစ်မှားမိခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားရှင်ကို အထင်သေးပြီး နှုတ်နဲ့ ပစ်မှားမိခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံကြောင့် သူကိူယ်တိုင် ပါရမီပြည့်လို့ ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘ၀မှာတောင် အစာရေစာငတ်ပြတ်ခံပြီး ၆နှစ်တိတိ
တစ်ကယ်တော့ ပွင့်ခဲ့ပြီးတဲ့ ဘုရားရှင်တိုင်းဟာ ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ ပါရမီ ၇ှိနေပြီမို့ 
အနည်းဆုံး ၇ ရက် အများဆုံး ၇ လ လောက်ပဲ ဒုက္ခရစရိယ ကျင့်ခဲ့ရတာပါ။ဂေါတမဘုရားတစ်ဆူသာလျှင် ၆ နှစ်တိတိ ကျင့်ခဲ့တာဟာ
သူဘာသာခြားဘ၀ ရောက်ခဲ့တုန်းက ဘုရား၇ှင်ကို ပြစ်မှား မိတဲ့ အကုသိုလ်ကံကြောင့်ပါပဲ။ ကဿပဘုရားရှင် ဘုရားအဖြစ်ရောက်ပြီး တရားဟောတော့ သူငယ်ချင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်
သွားပေမယ့် ဂေါတမအလောင်းတော်က ဘာသာခြား မို့ ဘုရား၇ှင်ကို မဖူးသလို တရားလည်းမနာပါဘူး။ သူငယ်ချင်းက သုံးကြိမ်တိတိ ခေါ်တော့မှ ကဿပဘုရားရှင် ရဲ့ တရားကို
လေ့လာရင်း နောက်ဆုံးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားလက်ထပ်မှာ ဘုရားဖြစ်ဖို့ ဗျာဒိတ်ခံပြီး ပါရမီဖြည့်ခဲ့ ရတဲ့ ဘု၇ားအလောင်းတောင်မှ
ဘာသာခြား လူမျိုးခြားဘ၀ ရောက်ခဲ့သေးတာနော်။ချမ်းချမ်းတို့ လို သာမန်ပုထုဇဉ်တွေဆို ရောက်နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ခု…အ၇ှင်ဇ၀န မေတ္တာ၇ှင် (ေ၇ြွှပည်သာ) ရဲ့ တရားခွေထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းလေးတစ်ခုက..ရန်ကုန်ုမြို့ က
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဟာ သိတတ်တဲ့အ၇ွယ်က စပြီး ဘုရားမြင်တိုင်း အရမ်းကန်တော့ချင်တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သံဃာတော်တွေဆွမ်းခံကြွလာတာမြင်တိုင်း
အရမ်းဆွမ်းလောင်းချင်တယ်။အရမ်းလဲကန်တော့ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူမမိဘတွေက အတင်းအကျပ်တားမြစ်ထားတော့ လုံးဝမကန်တော့ရဲဘူးတဲ့။ အဲ့ဒီအခါမှာ သူမ အရွယ်ရောက်တော့
မြတ်စွာဘုရားကို စိတ်ထဲကနေ အာရုံပြုပြီး ***ကျွန်မသည် ရတနာသုံးပါးအား အမှန်တကယ် ကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်မိပါသည် ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ချင်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့်ကျွန်မအား ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားကလွဲပြီး ဘယ်သူကမှ ဇနီးအဖြစ်မယူနိုင်ပါစေသား***လို့ အဓိဌာန် ပြုပါတယ်။ သူမ အရွယ်ရောက်တော့ မိဘတွေက သင့်တော်တဲ့ သူတို့ ဘာသာဝင်
အမျိုးသားနဲ့ ပေးစားတိုင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့်ပျက်သွားကြတာချည်းပဲ။နောက်ဆုံးတော့ သူမ မိဘတွေက မွတ်စလင်ဖြစ်ရင်ပြီးရော ဆိုပြီးကွယ်းယာရောင်းတဲ့ သူနဲ့ တောင်
အတင်းအကျပ်ပေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီကွမ်းယာရောင်းတဲ့သူနဲ့ ယူမယ့်အစီအစဉ်ထပ်ပျက်သွားတော့မှ မိဘတွေက လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်.အခုသူမကိုယ်တိုင်
ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ပြီးလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ သူတို့ တွေ ယူဆထားတဲ့ ရုပ်ထုတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို အလိုလိုနေရင်း ကြည်ညိုမိတယ်ဆိုတာ
သူတို့ ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ယုံကြည်ချက်က ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ လူသားတွေကို ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်း
ထားပေးပါတယ်။တိရိစ္ဆာန်တွေက လူတွေ စားသုံးဖို့ ။သစ်ပင်တောတောင်တွေက နေထိုင်အသုံးပြုဖို့ ပေါ့။ဒါ့ကြောင့် ဖန်ဆင်းရှင် ကျေးဇူးရှင် အလ္လာဟ်အ၇ှင်မြတ်
ကို ကိုးကွယ်တဲ့သူက လွဲပြီး
ကျန်တဲ့ ရုပ်တုတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေအားလုံး၊ နဲ့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ အဆုံးအမ နဲ့ မနေတဲ့ သူတွေအားလုံးဟာ
စစ်ဆေးခြင်းခံရမယ့် ကီရာမ နေ့ မှာ မီးင၇ဲမှာ ဘယ်တော့မှ မလွတ်နိုင်တော့ပဲ ထာဝရ ငရဲ ခံနေရတော့မယ်။ လို့ www.tvmuslim.org မှာ ဖတ်ခဲ့ရဖူးတယ်။
သူတို့ ရဲ့ အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ ကုရ်အာ ကျမ်းထဲမှာလည်း
အခြားတစ်စုံတစ်ရာကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နဲ့ တွဲဖက်ကိုးကွယ်ခြင်းဟာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဘယ်လိုမှ မရနိုင်တဲ့ ဒုစရိုက်မှုကြီးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်းဟာ သူတို့ ရဲ့ ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး လေးလေးနက်နက်ပုံစံသွင်းထားပါတယ်။
ဆရာဦးဆန်းလွင် (ဆရာတော် အရှင်အာဒိစ္စရံသီ) ရေးသားတဲ့ ***ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်
ကိုးကွယ် ဆည်းကပ် လာသူတစ်ယောက် အကြောင်း*** စာအုပ်လေးထဲမှာ သူဟာ အရင်တုန်းက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်စစ်စစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး တခါတလေ ဘုရားပေါ်ကို
မိန်းမနဲ့ အတူ ရောက်ဖြစ်တယ်တဲ့၊ ရောက်တဲ့အခါတိုင်း သူ့မိန်းမ ဘုရားရှိခိုးနေတာကြည့်ပြီး ရင်ထဲမှာ အရမ်းပူပူလောင်လောင် ခံစားရတယ်တဲ့၊
အဲ့ဒါဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး
ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိဘတွေရဲ့ သွင်သင်ဆုံးမမှုကြောင့်တဲ့။ သူ့အမေသူ့ကို ဆုံးမနေကျ စကားက
“ဘယ်လောက် အသိဉာဏ် နည်းလိုက်ကြသလဲ ရုပ်တုကို ထိုင်ကန်တော့နေကြတယ်” တဲ့။ အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးဗဟုသုတရအောင် ၀ယ်ဖတ်သင့်တယ်။
ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးကိုအသေးစိတ် နှိုင်းယှဉ်ပြီးရှင်းပြထားပေးပါတယ်။
အခုအစ္စလာမ်အမျိုးသမီးဟာလည်း သူမရဲ့ဘာသာတရားနဲ့ မိဘတွေက ငယ်ငယ်ကတည်းက ပုံစံသွင်းထားပေမယ့်
ဒီဘ၀မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သော်လည်း ရတနာသုံးပါးအကြောင်း မသိနားမလည်ပဲနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဘုရားတရားသံဃာ ကို
့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေ အလိုလိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ အရင်ဘ၀တုန်းက သူမဟာ ရတနာသုံးပါးကို
တော်တော်လေးကြည်ညိုပြီး ဒါနသီလ၊ဘာဝနာ ကုသိုလ်တော်တော်များများလုပ်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူမဟာ ရတနာသုံးပါးကိုသာ ရိုသေပြီး ဒါန၊သီလဘာဝနာကုသိုလ်
ပြုပေမယ့် သောတပတ္တိမဂ်ညဏ်၊ဖိုလ်ညဏ်မရဘဲ သေဆုံးခဲ့တဲ့ အတွက် ဘာသာခြားဝမ်းထဲ ၀င်စားရတာပါပဲ။ လူဝင်စားဘ၀ကို ယုံကြည်လက်ခံတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခုပဲ၇ှိပါတယ်။
ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး လေ့လာမိတာလေးတစ်ခု ၇ှိပါတယ်။ ဘာသာတရားတိုင်းဟာ လက်တွေ့ ဘ၀မှာ မကောင်းတာမလုပ်ဖို့ စိတ်ကောင်းထားဖို့တော့ ဆုံးမခဲ့တာချည်းပါပဲ။
ဒါပေမယ့်…. သေပြီးမှ ဖြစ်မယ့် နောက်ဘ၀ ကိုယ်ကြိုတင်မသိတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ နိဗ္ဗာန် တို့ ကောင်းကင်ဘုံတို့ ငရဲပြည်တို့နဲ့ ပက်သက်ရင်တော့ ဟောထားတာချင်းမတူပြန်ဘူး။
ဗုဒ္ဓက ခရစ်တော်ထက် နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ လောက်စောခဲ့သလို တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ထက် နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော် အရင် ပေါ်ခဲ့တာနော်။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒက ဖန်ဆင်း၇ှင် ကယ်တင်၇ှင် ၀ါဒ ၊အတ္တ၀ါဒမဟုတ်ဘူး၊အကြောင်းအကျိုးကံဝါဒ၊ အနတ္တ၀ါဒ ၊
သူကိုယ်တိုင်က လူစစ်စစ် ကနေ တရားအလုံးစုံ သိလို့ ဘုရားဖြစ်လာတာ။သူ့ လိုမျိုးဘုရားဘ၀လူတိုင်းဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါ၇မီဆယ်ပါး ဖြည့်
ဆည်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါဟာ လူသားတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရေအချင်းနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါပဲ။ ဘယ်တန်ခိုးရှင် ဖန်ဆင်းရှင်ကမှာ ကိုယ့်ဘ၀ကို အပြစ်ပေးခွင့် မ၇ှိဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အပြုအမူကသာ ကိုယ့်ကို ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးပေးတာ။
ကံ၊ကံ ၇ဲ့ အကျိုး ကြောင့် လူ့ ဘ၀ နတ်ဘ၀ တိရိစ္ဆာန်ဘ၀ သံသရာမှာအဖန်ဖန်ကျင်လည်ခဲ့ရတယ်လို့ ဟောထား တယ်။
သံသရာဝဋ်က လွတ်ချင်ရင် ဒိဌိနဲ့ ဝီစိကိစ္စာ ကိုပယ်သတ်နိုင်မှ ကိလေသာ ကင်းမှ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း စိတ်ဆင်း၇ဲခြင်း ကင်းတဲ့ နိဗ္ဗာန် ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ သူကိုယ်တိုင် သိခဲ့ ကျင့်ခဲ့လို့ သူ့ လို လူသားအားလုံး သိနိုင်အောင် ကျင့်နိုင်အောင်
ကိလေသာကင်းတဲ့နည်း လက်တွေ့ ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်း၇ဲ ကင်းတဲ့ သတိပဌာန်ဝိပဿနာ တရားတွေကို ဟောထားပေးခဲ့တယ်။ သူကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ ကျင့်ကြံကြိုးစားခဲ့လို့ 
သူ့ လိုကျင့်ကြံတဲ့ သူတွေမှန်သမျှ သူ့ လိုဆင်းရဲဒုက္ခ ကင်းလိမ့်မယ်လို့ ဟောထားခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓကို မယုံကြည်ပေမယ့် ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူမှန်သမျှ ကောင်းတဲ့အကျိုး ကိုခံစားရမှာပါပဲ။
မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူ မှန်သမျှ မကောင်းတာခံစားရမှာပါပဲ။ဒါဟာ လောကဓမ္မတာ တရားပါ။
ကျန်တဲ့ ဘာသာ ၀င်တွေမှာကတော့ ကယ်တင်၇ှင် ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်ဆိုတာ ၇ှိတယ်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ယခင်နှစ်ပေါင်း(၁၄၀ဝ)ကျော်က ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံးကို ကရုဏာ တရားပွားများ၍ နှစ်ဘဝ၏ သုခချမ်းသာအဖြာဖြာကို ရစိမ့်သောငှာ တမန်တော်အပေါင်းတို့၏ အချုပ် ဖြစ်သောတမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်အား (ကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖြာဖြာသည် တမန်တော်မြတ်အပေါ်သို့ သက်ရောက်ပါစေ)နောက်ဆုံးတမန်တော်အဖြစ် စေလွှတ်တော်မူ၍ ကျမ်းဂန်အပေါင်းတို့၏ အချုပ်ဖြစ်သော ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ကိုလည်း တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ထံသို့
ချပေးသနားတော်မူခဲ့လို့ ဟောထားတယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ သက်၇ှိလူသားအားလုံးဟာ
ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ဖြစ်ခွင့်ရတာ မို့ ဘုရားသခင် ကိုမယုံကြည်တဲ့သူ အဆုံးအမနဲ့ မနေတဲ့ သူတွေ သေရင် ထာဝရငရဲကျရမယ်ဆိုရင်
ထာဝရ ဘုရားသခင်၇ှိတယ်လို့ ကိုယ်တိုင် ဟောခဲ့တဲ့ တမန်တော် ထက်အရင် ပွင့်ခဲ့တဲ့ လူသားစစ်စစ်ဗုဒ္ဓကလည်း ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ
နေနေတာမို့ဖန်ဆင်း၇ှင်ထာဝရ ဘုရားသခင် ကို မယုံလို့ ငရဲကျရမယ့်ပုံပဲ။ဘာသာခြားတွေက သေပြီးရင် ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ ငရဲပြည် နှစ်ခုပဲရောက်နိုင်တယ်။
ဒါတောင် ချက်ခြင်းမရောက်ဘူး။ဖန်ဆင်း၇ှင်ဘုရားသခင်ပြန်ဆင်းလာတာ စောင့်နေရဦးမယ်။
တိရိစ္ဆာန်ဘ၀ ပြိတ္တာဘ၀ ငရဲပြည်နဲ့ လူ့ ဘ၀ နတ်ဘ၀ ချက်ခြင်းမရောက်ဘူး။
လူတွေသေရင် မီးရှို့ လို့ မရဘူး။ ရေမျှော လို့ မရဘူး၊ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်သေသွားရင် ကိုယ့်ရဲ့ အသက်ဝိညာဉ် ဟာ အပြစ်တွေကို စစ်ဆေးဖို့ 
ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်ဖို့ဘုရားသခင် ပြန်ဆင်းလာမယ့်နေ့ ကို စောင့်နေရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘာသာခြားတွေက သေတာကို သေတယ်လို့ မသုံးဘူး။
ဘ၀ပြောင်းသွား တာလို့ မယူဆဘူး။ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်ခြင်း၊(ခရစ်တော် ပြန်မဆင်းမလာမချင်း တမလွန်မှာ စောင့်နေရမယ့်သဘော ချက်ချင်းလူ့ ဘ၀ နတ်ဘ၀ မဖြစ်ဘူး)
အလ္လာဟ်အ၇ှင်မြတ်အမိန့် ခံယူခြင်း (ကီရာမ နေ့ မှာ စစ်ဆေးမေးမြန်းမယ့် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်အမိန့် ကို စောင့်နေရမှာမို့ချက်ခြင်း ငရဲ ပြည်နဲ့နတ်ပြည် မရောက်သေးဘူး)
လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဘုရားသခင် ဘယ်နေ့ ပြန်ဆင်းလာမလဲ ဆိုတာကို ဘယ်မတန်တော်က မှ ရက်အတိအကျမဟောနိုင်ပြန်ဘူး။
အဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေကိုတစ်ကယ်လက်တွေ့ စပ်းသပ်လေ့လာလို့ မရဘူး။ယုတ္တိရှိအောင် သက်သေမပြနိုင်ဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာက သေရင် ဗုဒ္ဓဘုရားက မကယ်ဘူး၊ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့
ကုသိုလ်အကုသိုလ်အလိုက် ချက်ချင်း ငရ၊ဲတိရိစ္ဆာန် ၊ပြိတ္တာ၊လူ့ ဘ၀ နတ်ဘ၀ ရောက်နိုင်တယ် လို့ ဟောထားတယ်။ ဗုဒ္ဓက ဘယ်အလုပ်က အကုသိုလ်အလုပ်၊ဘယ်အလုပ်က ကုသိုလ်အလုပ်
အကြောင်းအကျိုး ကံတရားကိုဟောပြတယ်။ လူသားတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ၇ှိတဲ့ ကိလေသာတွေ ကြောင့် သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ ခြင်းအကြောင်းတရားတွေကို သိပြီး သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်
ကို လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့ ဆရာကောင်း တစ်ဆူပါ။
နောက်ဘ၀ ကိုယ်ကြိုတင်မသိတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ နိဗ္ဗာန် တို့ ကောင်းကင်ဘုံတို့ ငရဲပြည်တို့နဲ့ ပက်သက်ရင်တော့
ဘယ်အယူအဆ ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို နွားဝင်စား၊၀က်ဝင်စား လူဝင်စားတဲ့ သက်သေအထောက်အထား တော်တော်များများ ကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာကြီး လေးခု၇ှိပါတယ်။ဘာသာကြီး လေးခုထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲရင် ကျန်တဲ့ဘာသာအားလုံးဟာ ယုံကြည်မှု ဆိုတဲ့ သဒ္ဓါ တစ်ခုတည်းနဲ့ ကိုးကွယ် ကြပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်မှု
ပညာ မ၇ှိဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းသာလျှင် ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားအပြင် လေ့လာဆန်းမှုပညာနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုးကွယ်ရတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ပိုင်အသိညဏ်နဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ဝေဖန်ပြီးမှ ကိုးကွယ်ရတဲ့ဘာသာပါ။
“ကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ကို
မလေ့လာ မဆန်းစစ် ဘူးဆိုရင် ဘာသာတန်ဖိုး၊သာသနာတန်ဖိုး မသိနိုင်ဘူး။
အရှင်ဇ၀န မေတ္တာ၇ှင်ရွှေပြည်သာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင် မြတ်စွာဘုရားကို
***(၁) သေဘေး ဒါမှမဟုတ် အသက်အန္တရယ် တစ်ခုခုကို ကြောက်လို့မကိုးကွယ်သင့်ပါဘူး
(၂) လာဘ ဆိုတဲ့ ကြီးပွားချမ်းသာချင်လို့ စည်းစိမ်တိုးချင်လို့ ဆိုပြီး လည်း လာဘ်လာဘကို မျှော်ပြီး မကိုးကွယ်သင့်ပါဘူး
(၃) မိရိုးဖလာ ဆိုတဲ့ မိဘဘိုးဘွား အစဉ်အဆက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ကိုယ်ဟာ မြတ်စွာဘုရား ကို ကိုးကွယ်တာမဖြစ်သင့်ပါဘူး…***
တစ်ကယ်လို့ အဲ့ဒီ သုံးချက်နဲ့ ကိုယ်ဟာ မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့ရင် အညံ့စားဗုဒ္ဓဘာသာ ယုတ်ညံ့ တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လို့ မြတ်စွာဘုရား၇ှင်က ဟောကြားထားပါတယ်တဲ့။ကိုယ့်အဖေအမေတွေက ကိုးကွယ်နေလို့ မိရိုးဖလာ ရိုးရားအစဉ်အဆက်ကို ထိန်းသိမ်းချင်လို့ ကိုးကွယ်နေတာထက် ။
ဗုဒ္ဓကိုဘာ့ကြောင့် ကိုးကွယ်နေရတာလဲ။ဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်နေလို့ ငါတို့ အတွက် ဘယ်လိုတန်ဖိုး၇ှိနိုင်မလဲ။
မြတ်စွာဘုရား နှုတ်တော်က ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်ကို ကိုယ်ပိုင်အသိညဏ်နဲ့ 
သေချာ လေ့လာဆန်းဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ မှန် မမှန် အကြောင်းအကျိုး ခိုင်လုံမှုရှိမ၇ှိ ကိုယ်ပိုင်အသိညဏ်နဲ့ ဝေဖန်ပါ။ မြတ်စွာဘုရား၇ှင်ကိုယ်တိုင်ဝေဖန် ဆန်းစစ်တာကို နှစ်သက်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်များအားလုံးဟာ ***ဧဟိပသိကော*** ဆိုတဲ့ လာပါ ရှုလှည့်ပါ လို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး လေ့လာဆန်းစစ်ဝေဖန် နိုင်တဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးရှိပါတယ်။
ကိုယ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဘုရားဟောထားတဲ့ အဆုံးအမကိုသေချာနားလည်အောင် လေ့လာသင်ယူရပါ့မယ်။
ဘုရား၊တရားနဲ့ သံဃာတော်များရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ကိုယ်ပိုင်အသိညဏ်နဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ဝေဖန်ပြီးမှ မြတ်စွာဘုရားကို တစ်ကယ်ကြည်ညိုလေးစားမှ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဘုရားဟောထားတဲ့ အဆုံးအမကိုလည်း လက်တွေ့ ကြိုးစားကျင့်သုံးနိုင်ရပါ့မယ်။
နောက်ဘ၀တွေမှာ သင်မဖြစ်ချင်တဲ့ဘာသာဝင်၊သင်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုး တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် အခုအစ္စလာမ်အမျိုးသမီးလို ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန်လည်ကြည်ညိုမြတ်နိုးကိုးကွယ်ခွင့်
ရချင်မှ ရလိမ့်မယ်။ဒါက သင့်ရဲ့ ပါရမီ အနုအရင့် ကုသိုလ်ကံတရားနဲ့ ဆိုင်သေးတယ်။ဒါ့ကြောင့်
ကိုယ်ဟာ ဖြစ်လေရာဘ၀မှာရတနာသုံးပါးကိုပဲ ယုံကြည်ပြီးဘာသာခြား ရဲ့ ဝမ်းထဲ မ၀င်စားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီဘ၀၊မှာ လူမျိုးခြား၊ဘာသာခြားတွေကို မုန်းတဲ့စိတ်တွေလျော့ပါ၊ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း မဆဲပါနဲ့ 
ပြီးတော့ သောတပန် ဒါမှမဟုတ် စူဠသောတပန် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဒိဌိနဲ့ ဝီစိကိစ္စာ ပယ်သတ်ထား ပြီးပြီး၊ ငါးပါးသီလကို လည်း စောင့်ထိန်းစရာမလိုပဲ အသက်ထက်ဆုံးလုံခြုံသွား
ပြီ၊ရတနာသုံးပါးကိုလည်း အသက်နဲ့ လဲပြီး ကိုးကွယ်နိုင်လို့သူဟာ ဘယ်တော့မှ အပယ်မလားသလို ဘာသာခြားဘ၀ လဲ မရောက်နိုင်တော့ဘူးဆင်းရဲခြင်းကင်းရာ နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း ရောက်နိုင်ပြီ။
တစ်ကယ်လို့ ဒီဘ၀မှာ သောတပတ္တိမဂ်ညဏ်၊ဖိုလ်ညဏ် ရအောင်မကျင့်နိုင်သေးရင် စူဠသောတပန် ဖြစ်အောင် မကျင့်နိုင်သေးရင် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ကုသိုလ်တွေများများလုပ်ပါ။
ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ စိတ်ဓါတ် ဖြူစင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်း ***ဤကောင်းမှုကြောင့် နိဗ္ဗာန်မရောက်မီ ကျင်လည်ရမည့် ဘ၀ဘ၀၌ ရတနာသုံးပါး နဲ့ ကံကံရဲ့ အကျိုးကိုသာ ယုံကြည်သော ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သာ
ဖြစ်၇ပါလို၏” လို့ ၏ဆုတောင်းပါ။
***လောကကြီးကို အလှမဆင်ချင် နေပါ အမှိုက်တော့ မဖွ ပါနဲ့ *** ဆိုတဲ့ ဆရာဟိန်းဇေ ရဲ့ ဒဿန လေး လိုပဲ ကိုယ်ဟာ ဘာသာ၊သာသနာ တိုးတက်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ် ကို
ဘာသာရေးအဆုံးအမ နဲ့ အညီနေပြီး သာသနာကို မလျှုဒါန်း မချီးမြှုင့် မကာကွယ်မစောင့်ေ၇ှာက်ချင်နေပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူကြောင့်ကိုယ့်ဘာသာကို တခြားသော ဘာသာက
မဆဲဆိုပါနဲ့ ။ဘ၀တန်ဖိုး ဘာသာတန်ဖိုး သိအောင် ကြိုးစားပါ။ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချင်းချင်း တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အမှားတွေ့ ရင် လမ်းညွှန်ဆုံးမပါ။ ပြုပြင်ပေးပါ ။
ချမ်းချမ်းမသိတာတွေ နားမလည်တာတွေ မှားတာတွေကို သိတဲ့ တတ်တဲ့ သူတွေက ပြန်လည်ဆုံးမပါ။ ချမ်းချမ်း ထက်အသက်ငယ်တဲ့သူ ဆုံးမလည်း ချမ်းချမ်း ရဲ့ ဆရာအဖြစ် လေးစားနာခံပါတယ်။
ပုထုဇဉ်လူသားတိုင်းဟာ အမှားတော့မကင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မှားနေတာကိုမှားမှန်းသိပြီး ပြင်တတ်ဖို့ ပဲလိုပါတယ်။
အခုလဲ.. တစ်ချို့ သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ရဲ့ အမှားကို ချမ်းချမ်း ထောက်ပြတာဟာ သိလို့ တတ်လို့ဆရာလုပ်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို တစ်ကယ် မြတ်နိုး ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ 
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သိသင့်သိထိုက်တယ်လို့ ပါ။
*** နတ္ထိမေ သရဏံ အညံ
အဂ္ဂေါမေ သရဏံဝရံ
အဂ္ဂေါ ဗုဒ္ဓ သာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု
သဗ္ဗဘိက္ခုသံဃာ သုခိတာ ဟောတု
မာတာပိတု အာစရိယာ သုခိတာဟောတု
သဗ္ဗဒေ၀တာ ဝေနေယျ သုခိတ၊ဒုက္ခိတ
သဗ္ဗသတ္တာ ဘ၀န္တု သုခီတတ္တာ***
ဒီမေတ္တာပို့ ဂါထာလေးကို ချမ်းချမ်း ဘု၇ားရှိခိုးတိုင်း ၊သတိရတိုင်း အမြဲ၇ွတ်ဖတ် ပူဇော် ပါတယ်။
ရတနာ သုံးပါးကို ကြည်ညို လို့ပါဠိတွေကို မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်တွေလေ့လာရင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မှန်းပြီးစပ်ထားတဲ့ မေတ္တာပို့ ဂါထာလေးပါ။
ချမ်းချမ်းအတွက်တော့…လောကမှာ ကြောက်စရာ မုန်းစရာ ရွံစရာအကောင်းဆုံးဟာ အပြင်က လူတွေ၊မဟုတ်ဘူး။ ချမ်းချမ်းရဲ့ အတွင်းစိတ်ဓါတ်မှာ ၇ှိနေတဲ့
စိတ်ဆိုး စိတ်ညံ့တွေ ပါပဲ။ အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာ ချမ်းချမ်းအတွက် ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးရန်သူပါပဲ။
သူငယ်ချင်းတို့ ရော..အပြင်က ရန်သူကိုကြောက်မှာလား ။အတွင်းစိတ်ဓါတ်က ရန်သူကိုကြောက်မှာလား။
အတွင်းစိတ်ဓါတ်က ရန်သူကိုကြောက်ရင်တော့ ဆရာတော် သံဃာတော်များရဲ့ ဆုံးမသွန်သင်မှု နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ဓါတ်ကို ပြုပြင်ပါ။
သူ့ အသတ် သတ်တဲ့ လူသတ်သမားတွေ။
သူ့ ဥစ္စာပစ္စည်းလိမ်ညာခိုးယူနေတဲ့ သူခိုးတွေ
သူတစ်ပါးလင် သူတစ်ပါးချစ်သူ သူတစ်ပါးသားမယား နဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ သူတွေ
လဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိတော့ဘူးလေ…
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံး ကိုယ့်စိတ်ဓါတ် နဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြုပြင်ကြမယ်ဆိုရင် သေချာတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ
စိတ်အချမ်းသာဆုံး၊မေတ္တာ အပြည့်ဝဆုံးထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်…..
သာဓုဗျာ .ခုလိုတရားဟောပေးလို့ တပည့်တော်သောတာပန်ကိန်းဆိုက်သွားလို့……
မရဲတရဲနဲ့ ပြောချင်တာလေးရှိလို့ရေးလိုက်ပါတယ် ချမ်းချမ်းရေ … ။
အမေစုပေါင်းတာ မှားနေတယ် … ။
အမေဆုလို့ ရေးထားတော့ ဖတ်ရတာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်
တော်တော်လေး ဖော်ပြထားတာပဲ။ မေတ္တာရှင် Reference တွေလည်း စုံလင်လှပါတယ်။
(လူထုဒေါ်အမာ ရဲ့ ယောက်ျား ဒေါက်တာသာလှ ဟာ လူဝင်စားတစ်ယောက်ပါ။
သူဟာ အရင်ဘ၀က အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။
လူထုဒေါ်အမာရဲ့ ယောက်ျားဟာ ဒေါက်တာသန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ် တီချယ်ကြီးခင်ဗျား….. :eek:
ခင်ဗျားတို့ ဟာ က လဲ ဗျာ
ကျုပ် တို့ မန်းတလေးမြို့ ရဲ့ ထိပ်သီး အလေးမြတ်ထားစရာတွေ ပါဗျာ
မသိရင်လည်း မပြောကြပါနဲ့ 
လူထုဦးလှသာ ဒေါ်အမာယောင်္ကျားစစ်စစ်ပါ ။
ဗုဒ္ဒဘာသာက ဒီမိုကရေစီ ဘာသာပါ.. ဘာလုပ်ရမယ် ညာလုပ်ရမယ် ထိန်းချုပ်မထားပါဘူး..
ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာခံရသလို မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာပဲ ခံရမှာပါ..
” ဗုဒ္ဒဘာသာက ဒီမိုကရေစီ ဘာသာပါ ?????????? ”
အနဲဆုံး ၊ အခုအချိန် ၊ မြန်မာပြည် မှာတော့ ၊ မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် ။
” ရွှေည၀ါဆရာတော်ကို လူဝတ်လဲရန် ၊ ကြည့်မြင်တိုင် သာဓုကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားရန်
နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့ ၄၇ ပါး စုံညီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ် ”
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရတာ ၊ ရှက်ဖို့တောင် ကောင်းလာပြီ ။
တော်တော် ကျက်သရေတုန်းတဲ့ သတင်းပဲ ။
သံဃာ့မဟာနာယက ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို
တော်တော် အထင်အမြင်သေးသွားတယ် ။
နောက်နောင် ဒီသံဃာ့ မဟာနာယက ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တွေ့ရင်
ကန်တော့သင့် မသင့် တော်တော် စဉ်းစားရတော့မယ် ။
တိုင်းပြည်ကောင်းကြိုး အတွက်လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို
အားမပေးရဲတောင် ဒီလို မနှောက်ယှက်သင့်ဘူးလို့ ထင်တယ် ။
ရေရှည်မှာ ဒီသံဃာ့မဟာနာယက ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ် ဖြစ်သွားတော့မှာပဲ ။
မပြောပါနဲ့ဒေါ့ဗျာ ဒီလိုလက်သီးပုန်းစနစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆက်အုပ်ချုဎ်နေလို့ကဒေါ့ ဘယ်အဖေ(တရုတ်၊အမေရိကန်) ကိုပဲ အားကိုးကိုး
ဒုံရင်းကဒုံရင်းပါဘဲ (ထူးမခြားနား ငါလုဎ်လိုက်ရင် ငါလုဎ်ကြီးဖြစ်ရုံပါပဲ)
ဘယ်လိုဖြစ်လာသလည်းဆိုတော့.. အယူအဆအတွေးအခေါ် မတူသူတွေကိုပါ..ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မစက်ဟုဆိုသောအရာနဲ့ နှိပ်ကွပ်ရမယ်ဖြစ်လာတော့တာပဲ..။
…ထေရာတွေဂိုဏ်းဖွဲ့ပေးပြီး.. အာဏာစက်(အစိုးရ)က.. .ပေါင်းထားလိုက်တော့.. ဓမ္မစက်+အာဏာစက် .. အခုလိုတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာပါ..။
တိမ်ပေါ်နေတဲ့ လူတန်းစားဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုက်ပြီး.ငရဲနဲ့ခြောက် ဘုံနဲ့မြှောက်လို့.. . လူတွေက..ပြန်မလှန်ရဲအောင်လည်း.. အထပ်ထပ်..ရိုက်သွင်းထားခဲ့ကြတယ်..။
အရှည်ကြီးပဲ… တစ်ဝက်ဖတ်ပြီးသွားပြီ… နောက်နေ့ တစ်ဝက်ဖတ်ပြီးမှ Comment ထပ်ပေးမယ်.. အဟီး…
ဒီပို့စ် ကို Facebook မှာလဲ တင်သင့်တယ် ..
ချမ်းချမ်းပြောသလို အသိစိတ်တွေ လူသားတိုင်းမှာ ရှိနိုင်ခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ..
တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ မိတ်ဆွေတို့ သိတဲ့အတိုင်းလေ ..
တခြားတော့မပြောချင်ပါ .. ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ အရင် ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့ ..
ကျနော် ဆိုတဲ့ အပုပ်ကောင်ရုပ်ဆောင်ကြီးအတွက် အဲဒီအသိစိတ်မျိုးရှားပါးနေသေးလို့ပါ…။
ဒေါ်ဂျမ်းဂျမ်းခင်ဗျား ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့ ဒေါ်ချမ်းချမ်းခင်ဗျား
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ အခြားဘာသာဝင်တွေကို ဆဲရေးတိုင်းထွာတာဟာ
တော်တော်ဆိုးဝါးပါတယ် ကျုပ်တောင် ဒီအကြောင်းတွေကို ရေးမလို့ပါဘဲ မရေးတတ်လို့
ဒီနေရာကနေ တိုက်တွန်းခြင်ပါတယ် ဘာသာခြားတွေကို မဆဲကြဘို့ပါ
ဒီလို အခြားဘာသာခြားတွေကို ဆဲရေးတိုင်းထွာတယ်ဆိုတာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်
မိမိတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာတရားမှာ လုံးဝနားမလည်ဘူးဆိုတာ ထင်ရှားတယ်
ဒီဆိုဒ်ထဲ ဆဲတာကတော့ ကျုပ်တစ်ယောက်ထဲပါ
ကျုပ်အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် မဆဲတတ်ဘူးပြောတဲ့သူဟာ လူလိမ်ပါ
စာရေးသူအနေနှင့် ယ္ခု ဤပို့စ်အတွင်းမှာ ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းကို ယဉ်ကျေးစွာ
သစ္စာတရားတွေနှင့် ချဉ်းကပ်ပြီး ရေးထားပေမယ့်
ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေး မိုက်ရိုင်းထားတဲ့ စကားစုလေးတစ်ခု ရှိပါရဲ့
( ချမ်းချမ်းဘ၀ မှာ အဲဒီလောက် အောက်တန်းကျတဲ့သူ တစ်ခါမှမတွေ့ ဖူးဘူး၊
ရိုင်းစိုင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ငါးစိမ်းသည်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ယုတ်ညံ့တဲ့ စကားလုံတွေနဲ့ 
ငါးရောင်းတဲ့သူတွေကို ရိုင်းစိုင်းတဲ့လူတန်းစားတွေလို့ ဘယ်အစိုးရ ဘယ်ဥပဒေက
အဲ့ဒါတွေ အဲ့ဒါတွေ ကိုယ်က ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ
( ဒီဃနိကာယ် သီလက္ခန်ပါဠိတော် – ဗြဟ္မဇာလသုတ် – ပရိဗ္ဗာဇကကထာ )
သူတစ်ပါးတို့သည် ငါ၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ တရား၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ သံဃာ၏ အပြစ်ကို ဖြစ်စေ
ထို (ပြောကြရာ) ၌ သင်တို့သည် ရန်ငြိုးထားခြင်း နှလုံးမသာခြင်း စိတ် မကျေချမ်းခြင်း မဖြစ်စေသင်။
သင်တို့သည် အမျက်ထွက်ကြလျှင် နှလုံးမသာကြလျှင် သင်တို့သည်
သူတစ်ပါးတို့၏ စကားကောင်း စကားဆိုးကို သိနိုင် ကြပါမည်လော။
အပြစ်ကို ပြောကြရာ၌ ဤစကားသည် ဤအကြောင်း ကြောင့် လည်း မဟုတ်၊
ဤအကြောင်း ကြောင့် လည်း မမှန်၊ စင်စစ်အားဖြင့် ဤအပြစ်သည် ငါတို့၌ ထင်ရှားမရှိ ဟု
မဟုတ်သည်ကို မဟုတ်သည့် အတိုင်း သင်တို့ ဖြေရှင်းရမည်။
သူတစ်ပါးတို့သည် ငါ၏ဂုဏ်ကိုဖြစ်စေ တရား၏ဂုဏ်ကိုဖြစ်စေ သံဃာ၏ ဂုဏ်ကိုဖြစ်စေ ပြောကြလျှင်
ထို (ပြောကြရာ) ၌
သင်တို့သည် နှစ်သက်ခြင်း ဝမ်းသာခြင်း စိတ် တက်ြွကခြင်း မဖြစ်စေသင်။
နှစ်သက်ကြလျှင် ဝမ်းသာကြလျှင် စိတ်တက်ြွကကြလျှင် သင်တို့အားသာလျှင် အန္တရာယ်ဖြစ်ရာ၏။
ပြောကြရာ၌ ဤစကားသည် ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း ဟုတ်ပေ၏၊
ဤအကြောင်း ကြောင့် လည်း မှန်ပေ၏၊ စင်စစ် အားဖြင့် ဤဂုဏ်သည် ငါတို့၌ ထင်ရှားရှိပေ၏
ဟု ဟုတ်မှန်သည်ကို ဟုတ်မှန်သည့် အတိုင်း သင်တို့ ဝန်ခံရမည်။
မတူညီသော အတွေးဖြင့် ဤကွန်မင့် ကို ရေးပါသည် ။
ရွာသူလေး ချမ်းချမ်း ဆိုသော နာမည် ကို ကြားဖူးနေသည်မှာ ကြာပြီ ။
ကိုပေါက် (မန်းတလေး) ပြောပြသဖြင့် ရွာသူလေး ချမ်းချမ်း အကြောင်း ကို ကြားဖူးနေခဲ့သည် ။
ကဗျာဆရာမလေး တဲ့ ၊ သည်ပို့ စ်ကို ရေးသူ ရွာသူလေး ချမ်းချမ်း နှင့် အတူတူဘဲလားတော့ သေချာမသိပါ
ရွာသူလေး ချမ်းချမ်း ၏ သဘောထားများကို ကြိုက်နှစ်သက်မိပြီး ၊ ခန့် မှန်းချက်အရ
ရွာသူလေး ချမ်းချမ်း တစ်ယောက် ကွန်မင့်ဖြင့် အဆဲခံထားရပုံ ပေါက်ပါသည် ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မသိခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရသည့်အတွက် ရှဲရှဲ
အာဂ ရွာသား/သူ များပါလား…. ဘက်စုံတော်ကြပါပေတကား…
စာလုံးပေါင်းစစ်သော ဆရာမများလဲ ရှိကြပေတကား…
အ၇မ်းကောင်းလို့ အစမှ အဆုံးတိုင် သေသေချာချာဖတ်မိပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလဲ အ၇သာရှိတဲ့ အစားကောင်းကို တ၀ကြီး စား၇ပြီး ဗိုက် ၀ သွားသလို ခံစားမိပါတယ်။အ၇မ်းကို သဘောကျ ကျေနပ် မိပါတယ်။ ဘာသာေ၇း၊ စိတ်ဓာတ်၊တ၇ားတော်၇ဲ့ အနှစ်သာ၇တွေကို တကန့် ချင်း တင်ပြ သွားလို နှစ်ချိုက် မိတာပါ။ “ကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ကို
မလေ့လာ မဆန်းစစ် ဘူးဆိုရင် ဘာသာတန်ဖိုး၊သာသနာတန်ဖိုး မသိနိုင်ဘူး။ ဆို ပြီး တော့ ထောက်ပြ ထားတာလေးကို အကြိုက်ဆုံးပါ ဘဲ။
ဘာသာ၊သာသနာ အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဒရဲ့ အဆုံးအမ တ၇ားတွေကို လက်ခံ ယုံကြည် လိုက်နာမှ သာ
သံသ၇ာက လွတ်မြောက်ကြောင်းလမ်းပေါ်ကိုေ၇ာက်မှာဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြ နိုင်တဲ့ ပို့ စ် တခု ဖြစ်လို့ အထူးနှစ်သက် မိပါတယ်။
၇င်ထဲစွဲငြိမိတဲ့ စကားလေး ကတော့ …..
””အဓိက အရေးကြီးဆုံးက ဘယ်အရာကိုမဆို တန်ဖိုးသိအောင်သေချာလေ့လာဆန်းစစ်ပါ။ ***တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုး၇ှိမယ် တန်ဖိုး၇ှိမှ တန်ဖိုးထားကြမှာပါပဲ***”
နောက် လဲ ဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးအခေါ်လေးတွေ ကို အားလုံးကို မျှဝေပေးပါဦး။
သိသင့် သိထိုင်တာကိုပြောပြတဲ့ချမ်းချမ်း ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ကွန်းပေးပြီး ပိုသိထိုက်တာတွေကို ပြောပြတဲ့ရွာသားတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….
ကျေးဇူးပြုပြီး စာပြန်ပါ ။
ရေးချင်တာတွေရေးသွားပြီး ဘယ်သော အခါမှ စာဖတ်သူမှ ရေးသားသွားတဲ့
ကွန်မန့် တွေကို ပြန်လည် ချေပခြင်း ၊ ဆွေးနွေးခြင်း အစရှိတာကို ပြုလုပ်တာ
လုံးဝ မတွေ့ ခဲ့ပါဘူး ။ မိမိရေးသားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ရှုတဲ့ ပရိတ်သတ်ကို လေးစား
ခြင်းဖြင့် တုံ့ ပြန်ပေးပါ ။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ ” ငါ့စကား နွားရ ” ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။
ရဲ ဘေဘီ ရဲ
ရီပလိုင်း ရော် ပို့ စ် ကော်မန့် စ်
Really very very nice post. Totally I like it.
စာမူရှင်သည် မိမိစာအပေါ်ကော်မန့်ပေးသူများအား ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူဖြစ်ရမည်။
ချမ်းချမ်းနဲ့ရတဲ့ယောက်ကျားတော့ ကံကောင်းတာပဲ နေ့တိုင်းတရားနာလို့ရတယ်
ဟုတ်မှလဲ လုပ်ပါ အကိုလေးရာ သီလရှင်ဖြစ်နေပါဦးမယ် (စတာ)
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားတိုင်းဟာ မိမိယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားကို လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။ ဒါဟာ အခြေခံကျသော လူ့အခွင့်အရေးထဲက တစ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားတစ်ခုနှင့် တူတာတွေ ရှိသလို မတူတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်လို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားက အမှန်ဆုံးလို့ ထင်ကြတာလဲ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မှာ အစွဲတွေရှိကြပါတယ်။ အဲဒီအစွဲတွေ လွန်ကဲမှုကြောင့် ပဋိပက္ခတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားတိုင်းက မေတ္တာထားဖို့ ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့၊ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သူတွေကို ပေးဝေလှူဒါန်းဖို့ သွန်သင်ဆုံးမထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ နိဗ္ဗာန် မျှော်ကိုးသလို၊ တခြားသော ဘာသာတွေမှာလည်း ကောင်းကင်ဘုံ ကို မျှော်ကိုးကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ နောက်ဘုရားတစ်ဆူထပ်ပွင့်ဖို့ ရှိသလို.. တခြားသော ဘာသာတွေမှာလည်း ဘုရား ပြန်ကြွလာဖို့ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကောင်းတာ လုပ်ရင် ကောင်းတာခံရမယ်.. မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်း မကောင်းတာခံရမယ်ဆိုတာလည်း အတူတူပါပဲ…. မတူတာက (ဥပမာ…ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ထာဝရဘုရားသခင် မရှိဘူး…. ကျန်တဲ့ ဘာသာတွေမှာ ထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာ ရှိတယ်..) ဒါတော့ ကွဲကြပါတယ်။…ကျွန်တော်အနေဖြင့် ဘယ်ဟာ မှန်တယ်မှားတယ်လို့ မဝေဖန်လိုပါဘူး…. အဓိက က ဘာသာတရားတိုင်း အပြန်အလှန်လေးစားပြီး နားလည်မှု ရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်… လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုပြီး စဉ်းစားမိပါကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။………
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားတိုင်းဟာ မိမိယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားကို လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။ ဒါဟာ အခြေခံကျသော လူ့အခွင့်အရေးထဲက တစ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားတစ်ခုနှင့် တူတာတွေ ရှိသလို မတူတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်လို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားက အမှန်ဆုံးလို့ ထင်ကြတာလဲ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မှာ အစွဲတွေရှိကြပါတယ်။ အဲဒီအစွဲတွေ လွန်ကဲမှုကြောင့် ပဋိပက္ခတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားတိုင်းက မေတ္တာထားဖို့ ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့၊ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သူတွေကို ပေးဝေလှူဒါန်းဖို့ သွန်သင်ဆုံးမထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ နိဗ္ဗာန် မျှော်ကိုးသလို၊ တခြားသော ဘာသာတွေမှာလည်း ကောင်းကင်ဘုံ ကို မျှော်ကိုးကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ နောက်ဘုရားတစ်ဆူထပ်ပွင့်ဖို့ ရှိသလို.. တခြားသော ဘာသာတွေမှာလည်း ဘုရား ပြန်ကြွလာဖို့ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကောင်းတာ လုပ်ရင် ကောင်းတာခံရမယ်.. မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်း မကောင်းတာခံရမယ်ဆိုတာလည်း အတူတူပါပဲ…. မတူတာက (ဥပမာ…ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ထာဝရဘုရားသခင် မရှိဘူး…. ကျန်တဲ့ ဘာသာတွေမှာ ထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာ ရှိတယ်..) ဒါတော့ ကွဲကြပါတယ်။…ကျွန်တော်အနေဖြင့် ဘယ်ဟာ မှန်တယ်မှားတယ်လို့ မဝေဖန်လိုပါဘူး…. အဓိက က ဘာသာတရားတိုင်း အပြန်အလှန်လေးစားပြီး နားလည်မှု ရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်… လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုပြီး စဉ်းစားမိပါကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။……… (စာကြွင်း… လူထုဦးလှနှင့် လူထုဒေါ်အမာတော့ သနားပါတယ်ဗျာ.. )